I-Cozy StudioNear Palolem Beach Wifi.AC.GlassBalcony - I-Airbnb
I-Cozy StudioNear Palolem Beach Wifi.AC.GlassBalcony
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguAmit
Igumbi lestudiyo elixhotywe ngokugqibeleleyo kwindawo ekhuselekileyo enazo zonke izinto eziluncedo kunye namandla abuyiselweyo. IVerandah ukuhlala ngaphandle kwaye wonwabele uhlaza kunye nokuba wedwa.Iilwandle ezintle njengePalolem, iPatnem kunye neAgonda zikufuphi. I-Palolem Beach yimitha ye-500 kuphela yokuhamba ukusuka kwindlu. Kukho i-wifi elungileyo kakhulu ukuba ukwimo 'Yomsebenzi osuka eKhaya'. Injongo kukunika iindwendwe ukukhululeka kunye nokufudumala kweflethi kunye nemvakalelo yokuphila kakuhle kunye nokuzola.
Ifulethi elihonjisiweyo lenziwe ngendlela ekumgangatho ophezulu kunye nazo zonke izibonelelo ukukunika ukuhlala kamnandi kwaye uvuselele phakathi kohlaza. Ilungele abantu ababini kwaye ukuba unesilwanyana sasekhaya ke nceda uze nayo !!!
4.86 · Izimvo eziyi-44
yindawo enoxolo kakhulu phakathi kohlaza oluninzi
Umbuki zindwendwe ngu- Amit
Ndiyafumaneka kwi phone , whatsapp , sms , email.